एमसीसीको बहस सुनिरहेको छु, भित्र पसेर हेर्छुः सभामुख सापकोटा
सभामुखको सपथ लिनुभयो । अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
देखिहाल्नुभयो, मैले भर्खर पद पहाली सुरु गरेँ । यसैगरी प्राथमिकता क्रममा मैले कामलाई अगाडि बढाउँछु । सबैभन्दा पहिले कामहरु पहिले प्रमाणित गर्नुपर्ने विधेयकहरुबाट कामलाई सुरुवात गर्छु । त्यसपछि उता व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएका संकल्प प्रस्तावहरु, सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरु, विधेयकहरु त्यसको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्दै हामी कामलाई अगाडि बढाउँछौं र त्यसको साथसाथै त्यहाँको भावना बुझ्ने र त्यहाँ के समस्या छन्, त्यहाँका समस्याका बारेमा बुझेर कामलाई व्यवस्थित बनाउँछौं ।
हामीले मोटामोटी के सोचेका छौं भने सदनलाई अलि जीवन्त, व्यवस्थित बनाउनका लागि हामी सबै सचिवालयका सम्वद्ध कर्मचारी मित्रहरु, सिंगो सदन सबैलाई अलिकति देशको जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थाको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने ढंगले हामी अगाडि जान्छौं र कामको सुरुवात चाहिँ अहिलेदेखि भएर यो प्राथमिकताक्रमअनुसार अगाडि बढ्छ । काम अगाडि बढ्दैजाँदा तपाईंहरुले थाहा पाउँदै गर्नुहुन्छ ।
आफ्ना चुनौतीहरु के देख्नुभएको छ ?
मैले वास्तवमा त्यतिधेरै ठूला चुनौतिहरु देखेको छैन । किनभने मेरो काम भनेको सांसदहरुको भावनालाई समेटेर त्यहाँ निष्कर्ष निकालेको कुरालाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउने हो । त्यसकारण सिंगो सदन छ । १७५ जनाको । माथिल्लो सदन पनि छ । मलाई त्यस्तो धेरै चुनौति छन् जस्तो लागेको छैन । तर पनि कहिलेकाँही अलिबढी छलफलको आवश्यकता पर्छ । पार्टीहरुका बीचमा समन्वय गर्ने, प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै जाँदा समस्याहरु समाधान हुँदै जान्छन् ।
एमसीसीबारे नयाँ सभामुखको धारणा केहो भन्ने सबैतिर चासो छ । कसरी लिनुभएको छ?
अब पो मेरो ध्यान ती समग्र विषयहरुतिर केन्द्रित हुन्छ । अहिले त म भर्खर सभामुख भएको छु । त्यो अध्ययन गर्नुपर्‍यो, भित्र पस्नुपर्‍यो । तपाईंहरुलाई थाहा छ नि कुनै पनि विषय त्यतिखेर गहनरुपमा अध्ययन गरिन्छ जतिबेला त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले त बाहिर बहस भइरहेको छ । ठिकै छ मैले सुनिरहेको छु । भित्र पसेर हेरेपछि मैले के देख्छु । यसमा पनि मैले १७५ जना सांसदको भावनालाई समेट्न म अधिकतम् कोशिस गर्छु ।
प्रतिपक्षी सांसदहरुले संसद लामो समयदेखि जीवन्त छलफल हुने थलो भइसकेको छैन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् । कसरी समेट्नु हुन्छ उहाँहरुको भावनालाई ?
उहाँहरु सबैको भावना समेट्न मलाई निकै राम्रो आधार तयार भएको छ । किनभने प्रतिपक्षी खासगरी नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएर एउटा सद्भावको हात अगाडि बढाएको छ । र, ०६४ सालदेखि म निरन्तररुपमा संसदमा छु । पार्टीको हिसाबले पनि विभिन्न वार्ता आदिमा बसेको छु । त्यसैले देश र जनताप्रति इमान्दार भएर काम गर्दा कुनै पनि समस्या त्यतिधेरै जटिल होलाजस्तो लाग्दैन । किनभने जति ठूलो समस्या, त्यतिधेरै छलफल ।
एमसीसीबारे विवाद छ । यसमा तपाईंको समन्वयकारी भूमिका कस्तो हुन्छ ?
यसबारे बाहिर बहस छेडिएको छ अहिले । बहस छेडिएपछि निचोडतिर पुग्छ । अध्ययन गर्दै जाउँ । किन हतार गर्नुपर्‍यो ।
सडकमा मानवअधिकारको कुरा उठाएर विरोध भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
यो लोकतन्त्र हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यस्तो चलिरहन्छ भनेर बुझ्छु म ।
(नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटाको सपथ तथा पदभार ग्रहणपछि गरिएको संक्षिप्त कुराकानी)